Namoonni bakka gara garaatti jeequmsa kaasan 2,500 adda bahan - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni bakka gara garaatti jeequmsa kaasan 2,500 adda bahan
Waajjirri Ministeera Muummee ammaan booda mootummaan dhimma nageenya uummataa eeguufi olaantummaa seeraa mirkaneessuurratti yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeefatee akka hojjetu beeksise.
Dubbi Himtuun Waajjira Ministira Muummee Billenee Siyyum ibsa gaazexessitootaaf haala yeroo irratti kenniteen hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojjetamaa jiruun bakka garagaraatti namoonni jeequmsa keessatti hirmaatan 2,570 adda baafamuufi kanneen keessaas 1,300 seeratti dhihaataniiru jetteetti.
Billenee akka jettetti hoggansi haaraan erga gara aangootti dhufee buqqaatii guddaa bulchiinsa darberraa dhaale waliin rakkachaa turuu heerte.
Kamashiifi aanaalee Oromiyaa ollaarraa namoonni 50,000 buqqa'an
Buqqaatotni tibbana magaalaa Roobee qubatan eenyu?
Erga bara 2015 asii lammiilee sabbaboota garagaraatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an miiliyoona lamaafi kuma 300 keessaa namoonni kuma 875 qe'ee isaaniitti deebi'an.
Yeroo ammaas namoota qe'ee isaanii irraa buqq'an kanneen hojiin gara qe'ee isaaniitti deebisuu bal'inaan hojjetamaa jira jedhan.
Hojii kana milkeessuufis caasaan hojii kana hojjetu gandarraa hanga federaalaatti diriiree hojjechaa jira jedhan.
Hojiin buqqaatota bakka irraa buqqa'anitti deebisuu kunis akkaataa ulaagaa idil addunyaa eegeen, bakka deebi'anitti wabii nageenyaa haala argataniifi bu'uuraalee misoomaa bakka itti deebi'an kanaa guutuus hojjetamaa jiraachuu eeran
Ganna dhufaa jiru kanaan walqabatees dhibee ka'uu malu ittisuuf tajaajilli talaallii lammiilee buqqa'an kanneenif kan kennamu ta'uu himan.
Ibsuma kanaan msooma qarqara laggeenii Shaggariif galii walitti qabuuf sagantaan Irbaataa ministira muummee waliinii Caamsaa 19 (GC) tti beellamame.
Sagantaa misooma qarqara laggeenii shaggar kan wagga sadi keessatti xumuruuf qabame kan ilaaleenis, sagantaan irbaataa ministira muummee waliinii caamsaa 19tti beellamni qabamuufii himteetti.
Pirojektii kunis mula'ata magaalattii bareechuun alatti carraa hojii uumuu, jiraattotaaf naannoo mijataa uumuu, balaa lolaa laggeen magaalattii keessa jiraniin yeroo gannaa mudatu ittisuu kan karoorfateedha jedhan.
Sagantaa irbaataa Caamsaa 19 qophaa'u kanarrattis abbootiin qabeenyaa biyya keessaafi alaa, dhaabbileen garagaraa 200 tahan nihirmaatu jedhamees eegama.
Kanaan alattis sagantaa misooma Shaggar kanaaf biyyoonni akka Itaalii, Chinaafi biyyoonni biroos deeggarsa maallaqaa gochuu Dubbi Himtuun kuni heerteetti.
Beneshangul Gumuz: Rakkoo nageenyaa umameen namoonni 12 du'anii kumni 50 buqqa'an
30 Fuulbana 2018
Viidiyoo Baatii saddee guutuu akkanumaan taa'uutti jirra
Godina Gujiifi Geediyoo keessaa namoonni kumaatamni buqqa'uu miidiyaaleen gabaasaa jiru
19 Bitooteessa 2019
Xiyyaarri Itoophiyaa Kisimaayyoo akka hin qubanne dhorkamte
Baqattootni Siiriyaa Istaanbuul keessaa dirqiin baafamuuf